Kedu ka Orabrush si banye na Walmart | Martech Zone
Otu Orabrush siri banye na Walmart
Na Tọzdee, Septemba 20, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'ime afọ abụọ, Dr. Orabrush wee si n'ire nke a na-arụzi ụgbọala na-ere mba na Walmart ọ bụla gafee mba ahụ. E reela ihe karịrị nde abụọ nke ndị na-ehicha ire ha n'eweghị ọ bụla omenala mgbasa ozi.
Igodo nke usoro ha bụ mgbasa ozi ịchụso ọgụ nke jikọtara akụkụ niile kachasị dị irè nke ịrịa ọrịa na ahịa echere. Orabrush aburula ihe Youtube, ya na ya Gwọọ ajọ ume na-enye ihe karịrị nde 38 na ndị debanyere aha 160,000, na-eme ka ọ bụrụ nke atọ na-akwado nkwado ọwa, na-esote naanị Old Spice na Apple. Dị ka anyị maara, ọ bụ ngwaahịa mbụ na-esi na ihe ọ bụla gaa na nkesa zuru ụwa ọnụ na-eji Youtube.
Nke a bụ mmebi nke usoro ahịa ahịa dị egwu:
Otu ihe dị omimi nke atụmatụ a gbadoro anya bụ ndị ọrụ Walmart na Facebook na mgbasa ozi mgbasa ozi iji nweta Orabrush na ụlọ ahịa ha. Orabrush na-ere ugbu a na mba, ha mere ya na-enweghị mgbe ị gara ileta ngwaahịa ahụ ozugbo na ụlọ ọrụ ahụ!
Nwelite: Gbalia ige nti ajuju ajuju nke anyi na Jeffrey na Austin nwere!
Kedụ ka e si eji ekwentị?
Sep 20, 2011 na 4:48 PM
Kedu ihe na-eme ka akụkọ akụ na ụba, dị jụụ. Ugbu a na Walmart ga-ebu ngwaahịa Orabrush, ndị ọrụ Walmart bụ ndị nwere ike ịkọwapụta omume ọma nke ngwaahịa a nwere ike ịgbanwe ụda ha. Ntuziaka Nkwado FTC a gbanwere agbanweghị eme ka oku a dị mkpa maka ndị ọrụ nke ndị na-ere ahịa na-ebu ngwaahịa, mana ọ bụ akụkụ nke eziokwu ọhụrụ nke iji ọwa mmekọrịta maka nkwado.